लण्डन । फाइनान्सियल सर्भिसको क्षेत्रमा बेलायतमा स्थापित हुन सफल छ– ए स्टार फाइनान्सियल सर्भिसेज ।
नेपाली व्यवस्थापनमा सन् २०११ देखि सुरु ए स्टारको मुख्य कार्यालय लण्डनको वेम्बलीमा छ भने गत वर्षदेखि केन्टको आसफोर्डमा शाखा कार्यालय र फार्नबरोमा सम्पर्क कार्यालय पनि सञ्चालित छन् ।
मोर्गेज, इन्सुरेन्स, विल तथा स्टेट प्लानिङ, पेन्सन र इन्भेस्टमेन्ट लगायतका फाइनान्सियल सर्भिस 'वन स्टप' सपको रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, ए स्टारले । नेपाली समुदायको हितलाई ध्यानमा राख्दै नियमति रुपमा निशुल्क सचेतना तथा परामर्श कार्यक्रम समेत ए स्टारले गर्दै आएको छ ।
ए स्टार फाइनान्सियल सर्भिसेजका प्रिन्सिपल डाइरेक्टर तथा इण्डिपेन्डेन्ट फाइनान्सियल एड्भाइजर मिन दर्लामीसँग बेलायतको प्रपर्टी बजारको पछिल्लो ट्रेण्ड तथा यससँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरुमा केन्द्रित रहेर नेपालीपत्रले संवाद गरेको छ ।
१. हालै बैंक अफ ईग्ल्याण्डले बेस ब्याजदरमा बृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले प्रपर्टी बजारमा के असर पार्छ ?
पछिल्लो दश वर्षमा पहिलोपटक बैंक अफ इंग्ल्याण्डले बेस ब्याजदर बढाएको छ । ० दशमलव २५ बाट बढाएर ० दशमलब ५० बनाइएको छ । प्रपर्टी बजारमा यसले मुख्यत ट्रयाकर मोर्गेज र भेरिएबल मोर्गेजमा बस्नेहरुलाई असर गर्नेछ । बैंक ब्याजदर बढेका कारण उनीहरुले बुझाउनुपर्ने मोर्गेज पनि बढ्नेछ । फिक्सड मोर्गेजमा बस्नेहरुलाई भने रिमोर्गेज गर्ने बेला नभएसम्म असर पर्नेछैन ।
धेरै बैंकहरुले यहि डिसेम्बरबाट ब्याजदर बढाउने समाचार आइरहेका छन् । त्यसैले फिक्सड मोर्गेजको पिरियड सकिन लागेकाहरुले त्यसअघि नै रिमोर्गेज गराउनु उत्तम हुन्छ ।
२. बेलायतमा घरको मूल्य घटिरहेको भन्ने सुनिन्छ नि, के साँचो हो ?
ब्रेक्जिटको अनिश्चितताले गर्दा पाउण्डको भाउ घटेको छ । जसकारण इन्फलेसन (मुद्रास्फिति) बढेको छ । त्यसको असरस्वरुप बैंक ब्याजदर पनि बढ्यो । यी कारणहरुले गर्दा हाउसिङ मार्केट अहिले सुस्त भएको छ । घरहरुको मूल्य घटेको भन्दा पनि जुन अनुपातमा बढ्नुपर्ने थियो, त्यो नबढेको हो । पहिला बजारमा बेच्न राखेको घरको आस्किङ प्राइस भन्दा माथिबाट अफर गर्नुपथ्र्याे, अहिले यहि अनिश्चितताका कारण त्यसभन्दा पनि तलबाटै नेगोसिएट गर्न मिल्ने अवस्था छ ।
३. नेपालीहरुको हकमा कस्तो छ त पछिल्लो ट्रेण्ड ?
अहिले बेलायतमा बस्ने नेपालीहरुको आयस्रोत तथा घर किन्न सक्ने क्षमता बढेको छ । कतिपयले अहिले बजार सुस्ताएको मौकामा पनि घर किनिरहेका छन् । त्यस्तै, आजभन्दा केही वर्ष अघि नै घर किन्नेहरुकोे घरको भाउ अहिले बढेको छ र मोर्गेज घटेको छ । जसकारण इक्विटी बढेको छ । यहि इक्विटीलाई प्रयोग गरेर कतिपय नेपालीहरुले दोस्रो, तेस्रो घर किन्ने पनि गरिरहेका छन् ।
४. घर किन्नेहरुले के कस्ता कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ?
सुरुमा आफ्नो हैसियत र क्षमता कति छ, बुझ्नु जरुरी छ । मोर्गेज पाएर मात्र हुँदैन, पछि मासिक रुपमा कतिसम्म बुझाउन सकिन्छ, आफ्नो आयस्रोतले भ्याउँछ वा भ्याउँदैन जस्ता कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, घर कुन प्रयोजनका लागि किन्न लागेको हो भन्ने पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । बस्नका लागि एक घर उपयुक्त हुन सक्छ भने त्यहीं घर व्यवसायिक प्रयोगका लागि उपयोगी नहुन सक्छ । ठूलो परिवार छ भने त्यही अनुसारको घर चाहिन्छ, सिटीमा आवतजावत गर्न पर्नेहरुलाई त्यसका लागि पायक हुने लोकेसन पनि हेर्नुप¥यो । त्यसवाहेक घर कुन एरियामा छ, त्यो ठाउंमा स्कुल, यातायात , सुरक्षा लगायतका पक्षमा के कस्ता सुविधाहरु छन् भन्नेबारे पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
५ के मोर्गेज प्रोटेक्सन तथा जीवन बिमा गर्नु आवश्यक छ ?
मोर्गेज प्रोटेक्सन आधारभुत कुरा हो । यदि मोर्गेज लिने व्यक्तिको मृत्यु भयो र उसले मोर्गेज प्रोटेक्सन गराएको छ भने, बिमाको रकमले बैंकलाई मोर्गेज तिरेर उसको परिवारले घर पाउँछ । मोर्गेज प्रोटेक्सन गरेको रकम मोर्गेज बुझाउँदै जाँदा मोर्गेजसँगै रकम पनि घट्दै जान्छ । त्यस्तै, लेभल टर्म लाइफ इन्सोरेन्सले पनि मोर्गेज लिने व्यक्तिको मृत्यु भएको खण्डमा बीमा रकमले भ्याएसम्म बैंकलाई बुझाउनुपर्ने रकम कभर गरिदिन्छ । यो बिमाका लागि भने बिमा गरेको रकम जति वर्षका लागि गरेको हो, त्यो अवधिसम्म घटबढ हुँदैन ।
आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि मोर्गेज प्रोटेक्सन तथा जीवन बिमा आवश्यक आधारभूत कुरा हुन् । तर नेपालीहरुमा भने यसबारे चेतना कम छ । पछिल्लो समय मात्रै यसबारेको बुझाई बिस्तारै बढ्न लागेको देखिन्छ ।
६. बेलायतका नेपालीहरुको घरमा अहिले चोरी बढेको छ, यसलाई बिल्डिङ तथा कन्टेन्टस् बिमाले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ?
बिल्डिङ बिमा त अनिवार्य नै हुन्छ । कसैको घर आगलागी भए, भत्किए वा अन्य कुनै कारणले क्षति भए पुनर्निर्माण गर्न लाग्ने अनुमानित रकम बराबरको बिल्डिङ बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कुनै अवस्था आयो भने, यहि बिमाले घरको पुनर्निर्माणको लागि कभर गर्छ ।
घरभित्रका सरसामान र सम्पत्तिको लागि भने कन्टेन्टस बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले घरभित्रका सबै सरसामान, गरगहना आदिलाई समेट्छ । तर आफ्ना सबै सरसामानहरु खरिद गरेको बिल तथा प्रमाणहरु भने सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
७. विल्स तथा स्टेट प्लानिङ (ईच्छापत्र) बनाउन आवश्यक छ त ?
बेलायतको कानुन नेपालको भन्दा फरक छ । यहाँ कसैको सम्पत्ति उसैले ईच्छा गरेको व्यक्तिले मात्र लिन पाउँछ, अरु कसैले हक दाबी गर्न पाउँदैन । त्यसैले, आफ्नो मृत्युपछि आफनो सम्पति कसले पाउने भनेर ईच्छापत्र गर्नु ठीक हुन्छ । यदि कसैले ईच्छापत्र बनाएको छैन भने उसको मृत्युपछि सबै प्रक्रिया लोकल प्रोबेटको माध्यमबाट जान्छ, उनीहरुले नै नजिकको को हो ? भन्ने पहिचान गर्नतर्फ लाग्छन् । यस्तो अवस्थामा एकातिर आफ्नो ईच्छा भएको व्यक्तिले सम्पत्ति नपाउने सम्भावना रहन्छ भने अर्कोतिर बढी समय र खर्च पनि हुन्छ ।
८. अन्त्यमा नेपालीहरुलाई केही सुझाव छ ?
अहिले मार्केट सुस्ताएको छ । घरको मूल्य अपेक्षित रुपमा बढेको छैन । यसर्थ बार्गेनिङ पावर बढेको अवस्था छ । घर किन्न चाहनेहरुले यही मौकाको सदुपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । खासगरी पहिलोपटक अर्थात् रेसिडेन्सीयल घर किन्नेले ढुक्क भएर किन्नु भए हुन्छ । तपाईलाई प्रपर्टी, मोर्गेज, इन्सुरेन्स आदिसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा परामर्श चाहिएको छ भने, ए स्टारलाई सम्पर्क गर्नुहोस् । हामी तपाईलाई निशुल्क परामर्श उपलबध गराउनेछौं ।